TOFEL အမှတ်ကောင်းမွန်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၂) • POINT
June 15, 2018 October 22, 2019
TOEFL ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေအတွက် စာမေးပွဲဖြေခါနီး သိသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ အမှတ်ကောင်းရစေမယ့် လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁ . TOFEL စားမေးပွဲနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
TOFEL iBT သင်ခန်းစာနှင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းစာတွေက စာမေးပွဲက ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲ၊ စာမေးပွဲအတွက် အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဗျုဟာတွေ၊ အမှတ်ရဖို့ယေဘုယျအချက်တွေကို လေ့လာပါ။ စာမေးပွဲမေးခွန်းများများကို လေ့ကျင့်ပြီး များများဖြေကြည့်ပါ။
TOFELသင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ပိုင်း စာမေးပွဲနေ့အတွက် သေချာပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပြီလို့ ခံစားရလာမှာပါ။
၂ . TOFEL အမှတ် သတ်မှတ်ချက်ကို ရှာဖွေပါ
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းတစ်ခုခုရဲ့အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့အမှတ်သတ်မှတ်ချက်ကိုရှာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
စာရွက်နဲ့ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲက ကွန်ဗျုတာနဲ့ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲမှာ ပေးတဲ့အမှတ်တွေကကွာပါတယ်။
စာမေးပွဲကြီးမှာရတဲ့အမှတ်က လေ့ကျင့်ရေးစာမေးပွဲတွေမှာရတဲ့အမှတ်ထက် နည်းတတ်ပါတယ်။
၃ . နယ်ပယ်မျိုးစုံမှ လေ့လာပါ
စာသင်ခန်းထဲမှာမြင်နေရ၊ ကြားနေရတဲ့ဘာသာရပ်တွေအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီ ဖတ်စာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ encyclopediasတွေ၊ research စာရွက်တွေကိုလည်းဖတ်ပါ။ အဲဒါကလဲ သင့်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေပါတယ်။
၄ . များများလေ့ကျင့်ပါ
စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ TOFELမှာ ပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍ ၄ခုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရလဲကြယ်ဝစေပါတယ်။
အမျိုးမျိုုးသောစာအုပ်တွေအသုံးပြုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကို ရွေးထုတ်ခြင်းဟာပြည့်စုံတဲ့လေ့လာသင်ယူစရာကြီးကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
၅ . သင်မေးသမ ျှဖြေပေးမယ့် ဆရာကောင်းရှာထားပါ
ကျောင်းသားတွေရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TOFELအကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်မတွေက ပိုသိကြပါတယ်။
အမေရိကန်ကစာမေးပွဲစစ်ဆေးသူတွေက ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ပြီး မဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးတတ်ပြီး အဖြေရှိပြီးသားပါ။
ရှုပ်ယှက်ခက်နေတဲ့သဒါ္ဒမေးခွန်းတွေက မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေရှင်းစေပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးစေကာအမှတ်ကောင်းကောင်းရရှိစေပါတယ်။
၆ . စာမေးပွဲနေ့အတွက် ပြင်ဆင်ပါ
AES နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာအကုန်ပြီးသွားပါက ETS ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကစာမေးပွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေ၊ လိုအပ်တာတွေ စာမေးပွဲခန်းထဲဘာတွေယူသင့်သလဲ၊ ဘာတွေမယူသင့်ဘူလဲဆိုတာတွေကို ရှင်းပြပေးပါတယ်။
၇ . အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်ပါ
ကျောင်းသားတော်တော်များများက ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ဆုံးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အချိန်မကျော်လွန်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
၈ . မှတ်စုကောင်းကောင်းမှတ်ပါ
မှတ်စုစုမှတ်ခြင်းက တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။
သင်ကြားလိုက်တာတွေ၊ ဖတ်ထားတာတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာကို မှတ်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
သတင်းနားထောင်တာတွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကြည့်တာတွေ၊ တီဗီကြည့်တာတွေ စတဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေမှာလဲ လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
၉ . မေးခွန်းတိုင်းဖြေပါ
ဘယ်တော့မှမေးခွန်းကိုကွက်လပ်မချန်ထားပါနဲ့။ သင်မှားပြီးသိထားတဲ့အဖြေတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ပညာရစရာခန့်မှန်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အဖြေမှန်ရဖို့ ၂၅% လောက်သေချာမှာပါ။
၁၀ . Reading အတွက် ပြင်ဆင်ပါ
အဘိဓာန်အသုံးမပြုဘဲ စာဖတ်ဖို့လေ့ကျင့်ပါ။ စကားလုံးတိုင်းကို နားလည်စရာမလိုဘဲ စာဖတ်အားကောင်းလာဖို့ အဲဒါကကူညီမှာပါ။
စာပုဒ်တစ်ပုဒ်မှာမေးခွန်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းရာကို အာရုံစိုက်ပါ။ စာပုဒ်ကိုအပေါ်ယံဖတ်ပြီး မေးခွန်းကိုဖတ်ပါ။ တိတိကျကျအဖြေရဖို့ထပ်ဖတ်ပါ။
အနည်းဆုံးဝေါဟာရမေးခွန်းတွေ၊ အချက်ကျမေးခွန်းတွေနဲ့ ကောက်ချက်ချမေးခွန်းတွေဖြေဖို့ အဓိကကျတဲ့မေးခွန်းတွေမေးသင့်ပါတယ်။
၁၁ . Listening အတွက် ပြင်ဆင်ပါ
တကယ့်စာမေးပွဲဖြေရသလို CD ကိုတစ်ခါပဲဖွင့်ပါ။
အဲဒါကသင့်နားကိုပထမအကြိမ်မှာတင် ပြည့်ပြည့်၀၀ နားထောင်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၂ . Writing အတွက် ပြင်ဆင်ပါ
လေ့ကျင့်ရေးစာမေးပွဲတွေမှာ ကြိယာပုဒ်စုတွေကိုမှတ်သားခြင်းက စာရေးရတဲ့အပိုင်းပထမပုဒ်မှာ အချိတ်အဆက်မိကြောင်းပြသပါတယ်။
ဝေါဟာရတွေ၊ punctuation တွေကို အသုံးပြုပါ။
အက်ဆေးအတွက်လေ့ကျင့်နေစဉ် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ပုံစံကို ရှာပြီးလေ့ကျင့်တိုင်းအသုံးချပါ။
Transation တွေအသုံးပြုပြီး အက်ဆေးကို ဖတ်ရလွယ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
By Shwe Yi
…TOEFL ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေအတွက် စာမေးပွဲဖြေခါနီး သိသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ အမှတ်ကောင်းရစေမယ့် လမ်းညှွန်ချက်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။…
၁ . TOFEL စားမေးပွဲနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ…
TOFEL iBT သင်ခန်းစာနှင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းစာတွေက စာမေးပွဲက ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲ၊ စာမေးပွဲအတွက် အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဗျုဟာတွေ၊ အမှတ်ရဖို့ယေဘုယျအချက်တွေကို လေ့လာပါ။
စာမေးပွဲမေးခွန်းများများကို လေ့ကျင့်ပြီး များများဖြေကြည့်ပါ။TOFELသင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ပိုင်း စာမေးပွဲနေ့အတွက် သေချာပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပြီလို့ ခံစားရလာမှာပါ။…
၂ . TOFEL အမှတ် သတ်မှတ်ချက်ကို ရှာဖွေပါ…
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းတစ်ခုခုရဲ့အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့အမှတ်သတ်မှတ်ချက်ကိုရှာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။စာရွက်နဲ့ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲက ကွန်ဗျုတာနဲ့ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲမှာ ပေးတဲ့အမှတ်တွေကကွာပါတယ်။စာမေးပွဲကြီးမှာရတဲ့အမှတ်က လေ့ကျင့်ရေးစာမေးပွဲတွေမှာရတဲ့အမှတ်ထက် နည်းတတ်ပါတယ်။…
၃ . နယ်ပယ်မျိုးစုံမှ လေ့လာပါ…
စာသင်ခန်းထဲမှာမြင်နေရ၊ ကြားနေရတဲ့ဘာသာရပ်တွေအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီ ဖတ်စာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ encyclopediasတွေ၊ research စာရွက်တွေကိုလည်းဖတ်ပါ။ အဲဒါကလဲ သင့်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေပါတယ်။…
၄ . များများလေ့ကျင့်ပါ…
စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ TOFELမှာ ပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍဍ ၄ခုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရလဲကြယ်ဝစေပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောစာအုပ်တွေအသုံးပြုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကို ရွေးထုတ်ခြင်းဟာပြည့်စုံတဲ့လေ့လာသင်ယူစရာကြီးကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။…
၅ . သင်မေးသမျှဖြေပေးမယ့် ဆရာကောင်းရှာထားပါ..
.ကျောင်းသားတွေရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TOFELအကြောင်းကို အင်္ဂ္လိပ်စာသင်တဲ့အင်္ဂ္လိပ်မတွေက ပိုသိကြပါတယ်။အမေရိကန်ကစာမေးပွဲစစ်ဆေးသူတွေက ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ပြီး မဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးတတ်ပြီး အဖြေရှိပြီးသားပါ။
ရှုပ်ယှက်ခက်နေတဲ့သဒါ္ဒမေးခွန်းတွေက မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေရှင်းစေပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးစေကာအမှတ်ကောင်းကောင်းရရှိစေပါတယ်။…
၆ . စာမေးပွဲနေ့အတွက် ပြင်ဆင်ပါ…
AES နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာအကုန်ပြီးသွားပါက ETS ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကစာမေးပွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေ၊ လိုအပ်တာတွေ စာမေးပွဲခန်းထဲဘာတွေယူသင့်သလဲ၊ ဘာတွေမယူသင့်ဘူလဲဆိုတာတွေကို ရှင်းပြပေးပါတယ်။…
၇ . အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်ပါ…
ကျောင်းသားတော်တော်များများက ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ဆုံးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အချိန်မကျော်လွန်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။…
၈ . မှတ်စုကောင်းကောင်းမှတ်ပါ…
မှတ်စုစုမှတ်ခြင်းက တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။သင်ကြားလိုက်တာတွေ၊ ဖတ်ထားတာတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာကို မှတ်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
သတင်းနားထောင်တာတွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကြည့်တာတွေ၊ တီဗီကြည့်တာတွေ စတဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေမှာလဲ လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်နားလည်လွယ်မယ့်အတိုကောက်လေးတွေနဲ့မှတ်သားပါ။…
၉ . မေးခွန်းတိုင်းဖြေပါ…
ဘယ်တော့မှမေးခွန်းကိုကွက်လပ်မချန်ထားပါနဲ့။ သင်မှားပြီးသိထားတဲ့အဖြေတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ပညာရစရာခန့်မှန်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အဖြေမှန်ရဖို့ ၂၅% လောက်သေချာမှာပါ။…
၁၀ . Reading အတွက် ပြင်ဆင်ပါ…
အဓိကကျတဲ့အဆင့်မြင့်ဝေါဟာရတွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ပါ။အဘိဓာန်အသုံးမပြုဘဲ စာဖတ်ဖို့လေ့ကျင့်ပါ။ စကားလုံးတိုင်းကို နားလည်စရာမလိုဘဲ စာဖတ်အားကောင်းလာဖို့ အဲဒါကကူညီမှာပါ။
အနည်းဆုံးဝေါဟာရမေးခွန်းတွေ၊ အချက်ကျမေးခွန်းတွေနဲ့ ကောက်ချက်ချမေးခွန်းတွေဖြေဖို့ အဓိကကျတဲ့မေးခွန်းတွေမေးသင့်ပါတယ်။စာပုဒ်တစ်ပုဒ်လုံးကို အချက်ကျကျထပ်ဖတိနိုင်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။…
၁၁ . Listening အတွက် ပြင်ဆင်ပါ…
တကယ့်စာမေးပွဲဖြေရသလို CD ကိုတစ်ခါပဲဖွင့်ပါ။အဲဒါကသင့်နားကိုပထမအကြိမ်မှာတင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားထောင်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။…
၁၂ . Writing အတွက် ပြင်ဆင်ပါ…
ဝေါဟာရတွေ၊ punctuation တွေကို အသုံးပြုပါ။စာမရေးခင်အက်ဆေးရေးဖို့အစီစဉ်ဆွဲရင်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်က သင့်ကိုပိုမြန်မြန်ပြီးစီးစေပါတယ်။
အက်ဆေးအတွက်လေ့ကျင့်နေစဉ် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ပုံစံကို ရှာပြီးလေ့ကျင့်တိုင်းအသုံးချပါ။သက်သေသာဓကတွေများများသုံးပါ။
Transation တွေအသုံးပြုပြီး အက်ဆေးကို ဖတ်ရလွယ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။အဆုံးမှာသင့်အက်ဆေးကိုကောင်းကောင်းစစ်နိုင်ဖို့အချိန်ထားပါ။…
learning TOFEL Education
IELTS ကို ထိရောက်စွာ လေ့လာနည်း (၇) သွယ်